Donald Trump oo ammaanay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin - BBC Somali
Donald Trump oo ammaanay Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin
Image caption Waxaa la eryey shaqaalihii ku sugnaa safaaradda Ruushka ee San Fransico iyo Washington
Madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay talaabada u qaaday madaxweynaha Ruushka Mr Putin ee ah in uusan ku dayan dowladda maamulka Obama oo horay u ceyriyay diblumaasiyiin Ruush ah.
Dadkaasi ayaa loo haysto inay ka dambeeyeen faragalin lagu sameeyey doorashadii Maraykanka ka dhacday.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa hore u sheegay in uusan musaafurin doonin diblumaasiyiinta Mareykanka ee dalkiisa ku sugan.
Putin wuxuu sheegay inuu sugayo illaa Donald Trump uu xilka kala wareegaayo bisha January, kahor inteysan go'aan gaarin.
Wuxuu xaqiijiyay in caruurta diblumaasiyiinta Mareykanka lagu casuumaayo aqalka Kremlin-ka oo dabaal degga sanadka cusub ay kaga qeybgali doonaan.
Image caption Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ruushka ayaa horey ugu baaqday in dalka Ruushka laga eryo diblomaasiyiin Maraykan ah
Wasaaradda arrimaha dibedda ee Ruushka ayaa horey ugu baaqday in dalka Ruushka laga eryo 35 diblmoaasiyiin u dhalatay Mareykanka taas oo jawaab u noqon lahayd tallaabo ay Washington qaaday.
Fariin qoraal ah oo uu dhigay barta Twitter-ka ayuu Donald Trump ku sheegay in madaxweyne Putin uu yahay nin waxgarad ah.
Lahaanshaha sawirka Twitter-ka Donald Trump
Image caption Qoraalka barta Twitter-ka ee Donald Trump
Putin oo sheegay in uusan xiriirka u jarayn Ukraine
19 Agoosto 2016
Putin oo ka dagay dalka Japan oo ay dhul isku hayaan